Akụkọ - OIS na EIS nke igwefoto mbugharị mbugharị
Ikwusi ike nke ihe ese foto dijitalụ tozuru oke, mana ọ bụghị na oghere igwefoto CCTV.
Enwere ụzọ abụọ dị iche iche iji belata mmetụta ahụ na-adịghị mma-cam.
Igwe anya na - eme ka ihe onyoonyo jiri ngwa ngwaike di n’ime oghere iji mee ka onyonyo ahụ guzosie ike ma jide ya nkọ. Ọ dịla kemgbe ogologo oge na ngwa elektrọnik ndị ahịa, mana enabatabeghị ya ebe niile na CCTV lens.
Igwe ihe onyonyo onyonyo bu ihe ngwanrọ ngwanrọ, na-ahọpụta akuku nke onyonyo na ihe mmetụta iji mee ka o yie ka isi okwu na igwefoto adighi ala.
Ka anyị leba anya n’otú ha abụọ si arụ ọrụ, na otu esi etinye ha na CCTV.
Nlekọta Ihe Nlereanya
Ngwa anya oyiyi stabilization, nke a na-akpọ OIS maka nkenke, dabere na oghere mgbatị anya, yana njikwa PID algorithm na-akpaghị aka.
Igwe oghere igwefoto nwere njigide ihe oyiyi anya nwere igwe dị n’ime ya nke na - emegharị otu ma ọ bụ karịa n’ime iko iko dị n’ime oghere dị ka igwefoto na - agagharị. Nke a na - eweta nsonaazụ na - agbanwe, na - egbochi ngagharị nke oghere na igwefoto (site na ịma jijiji nke aka onye ọrụ ma ọ bụ mmetụta nke ifufe, dịka ọmụmaatụ) na ikwe ka edekọ ihe oyiyi na - adịghị nkọ.
Igwefoto nwere oghere nwere ngosi ihe oyiyi na-ahụ anya nwere ike ijide foto ka doo anya na ọkwa dị ala karịa nke enweghị.
Nnukwu ihu bụ na idozi onyonyo na-achọ ọtụtụ ihe ndị ọzọ na lens, yana igwefoto nwere oghere OIS na anya m dị oke ọnụ karịa atụmatụ ndị na-esighi ike.
Maka nke a, OIS etobeghị etozu na igwe foto CCTV mbugharị.
Ntanetị ihe onyonyo elektrọnik
A na-akpọ mgbe ụfọdụ Electabel Stabilization EIS maka obere oge. EIS tumadi na-emezu site na software, nwere ihe ọ bụla na-eme na oghere.
Iji mee ka vidiyo na-adịghị agbanwe agbanwe, igwefoto nwere ike iwepụta ngalaba ndị na-anaghị achọ na-agagharị na okpokoro ọ bụla na ngwa ngwa eletriki na mpaghara ihe ọkụkụ. A na-edozi ihe ọkụkụ nke onyinyo ọ bụla iji kwụọ ụgwọ maka ịma jijiji, ị na-ahụ usoro egwu nke vidiyo.
Enwere ụzọ abụọ iji chọpụta ngalaba ndị na - agagharị. Otu were g-sensor, onye ọzọ jiri nchọpụta sọftụwia naanị.
Ka ị na-abanyekwu na ya, obere ogo nke vidiyo ikpeazụ ga-adị ala.
Na igwefoto CCTV, ụzọ abụọ ahụ adịchaghị mma n'ihi obere akụrụngwa dịka ogo ma ọ bụ mkpebi nke sistemụ mgbawa. Yabụ, mgbe itinyere EIS, ọ na-adabara naanị maka mkpọtụ dị ala.
Anyị ewepụtala igwefoto mgbatị mbugharị igwefoto, Kpọtụrụ sales@viewsheen.com maka nkọwa.